Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Ansixiyay In Cuna-Qabatayn Horleh Lasaaro Ruushka.
Maraykanka oo Ansixiyay In Cuna-Qabatayn Horleh Lasaaro Ruushka.
Aqalka Hoose ee Kongareeska Maraykanka ayaa cod Aqlabiyad ah ku taageeray in cunaqabateyn horleh la saaro dalalka Ruushka, Iran iyo Kuuriyada Waqooyi.
Mooshinka la horgeeyey Kongareeska ayaa qeexayey in Madaxweyne Donald Trump uusan khafiifin karin cunaqabateyntii horey xukuumadii Obama u saartay Ruushka, isla markaana cunaqabateyn dhaqaale oo horleh lasii saaro Ruushka, si jawaab looga dhigo faro gelintii Moscow ku sameysay doorashadii sanadkii hore ka dhacday Maraykanka.
Sharcigan uu Kongareeska ansixiyey ayaa ah mid ka hor imaanaya rabitaanka Trump oo isagu kasoo horjeeday in cunaqabateyn lasaaro Ruushka, isla markaana illaa iyo hada shaki gelinaya in Ruushka uu wax lug ah ku lahaa farogelinta lagu eedeeyey inuu ku sameeyey doorashadii Madaxweynaha.
Xildhibaano gaadhaya 419 ayaa codkooda ku taageeray mooshinkan, halkan 3 xildhibaan oo kaliya ay kasoo horjeesteen, inta badan xildhibaanada Xisbiga Trump ee Jamhuuriga ayaa taageeray sharcigan.
Mooshinkan ayaa loo gudbin doonaa Aqalka Sare ee Senateka hadii uu ansixiyo wuxuu usii gudbi doonaa saxiixa Madaxweynaha, balse Trump ayaan weli sheegin inuu adeegsan doono awoodiisa (Veto) oo uu ku qaadici karo sharcigan. Ruushka ayaa iyagu ka digay dhaqan gelinta sharcigan oo ay sheegeen inuu sii xumeyn doono xidhiidhka labada dal.